Warbixin ka hadleysa dadka ugu badan ee dareemaya xiisad, caro, murugo, walwal iyo xanuun nafsi ah… – Hagaag.com
Warbixin ka hadleysa dadka ugu badan ee dareemaya xiisad, caro, murugo, walwal iyo xanuun nafsi ah…
Posted on 7 Diseembar 2020 by Admin in Lifestyle // 0 Comments
Natiijooyinka ka soo baxay ra’yi ururinta Hay’adda Gallup ee Mareykanka waxay shaaca ka qaaday in Ciraaqiyiinta, Lubnaaniyiinta iyo Tunisiyaanka ay ka mid yihiin 10ka shacab ama bulsho ee ugu murugsan uguna walwalka badan, taasoo qeyb ka ah sahan lagu sameeyay 145 dal sannadkii 2019, kaasoo ay ka qeybgaleen dad ka badan 175,000 oo qof oo qaangaar ah.
Marka loo eego natiijooyinka warbixinta Gallup Global Emotions 2020, oo maanta la daabacay, 51% dadka reer Ciraaq (kun qof oo ka qeyb gashay) waxay sheegeen inay dareemayaan xiisad, caro, murugo, walwal iyo xanuun nafsi ah, sidaa darteed dadka reer Ciraaq ayaa kaalinta koowaad kaga jira adduunka, waxay la ildaran yihiin dareen diidmo ah, halka 48% ka jawaabeyaasha reer Lubnaan (1,000 qof oo ka jawaabtay) ay sheegeen inay la kulmeen shanta dareen ee la soo xusay.
Marka loo eego dadka reer Tuniisiya, 46% jawaabeyaasha (kun qof) waxay ku sheegeen ra’yi uruurinta Gallup inay la kulmeen shanta dareen ee kor ku xusan, iyagoo ka jawaabayay su’aalaha soo socotda: Ma la kulantay dareemada soo socda: xanuun nafsi ah, xiisad, murugo, walwal iyo xanaaq ama caro.
Inta badan shucuubta adduunka ee sheegay inay la kulmeen dareeno taban sida xiisad iyo murugo ayaa u kala horeeya sida soo socota: Ciraaq, Ruwanda (49%), Afghanistan, Chad, Lubnaan iyo Siera Leone (48% midkiiba), Guinea (47%), Tunisia, Iran iyo Togo (45%) midkiiba.
Warbixinta ‘Gallup Report on Sentiment Poll’ ayaa bog u qoondeysay Ciraaq. Waxay xustay in waddanku kaalinta koowaad ka galay sannadkii shanaad ee Tilmaanta Dadka ee la ildaran dareenno taban, warbixinta ayaa u aaneeysay qalalaasaha uu dalku soo maray sannado badan, iyo dhacdooyinka dhiigga badan ku daatay ee reer Ciraaq ay ka soo mareen, sida dagaallo Mad-habeedka, iyo dilkii ay la kulmeen ka-qaybgalayaal badan oo ka mid ahaa dibad-baxyadii dhowaa.
Dhamaadka sanadka 2019, boqolkiiba taageerada reer Ciraaq ee hogaankooda siyaasadeed hoos ayey uga dhacday 22% ilaa 13%, 9 kamid ah 10kii Ciraaqi waxay sheegeen in musuqmaasuq uu ku baahay hay’adaha dowlada.
Natiijooyinka cajiibka ah ee ka tarjumaya aragtida Lubnaan ee tayada noloshooda, kaliya 4% jawaabeyaasha ayaa sheegay in noloshooda ay soo hagaageyso, taas oo ah mid ka mid ah heerarka ugu hooseeya ee laga diiwaan geliyey adduunka.
Taas bedelkeeda, ra’yi ururinta Gallup waxay sheegaysaa in liiska 10-ka shacab ee adduunka ugu yar shanta dareen diidmo ay kala hoggaaminayaan Taiwan (13%), Kazakhstan (15%) iyo Mongolia (16%), ka dibna Turkmenistan, Poland iyo Estonia (17%), ka dibna Vietnam (18%), Malaysia Iyo Kyrgyzstan iyo Shiinaha (19%).
Hay’adda ‘Gallup Foundation’ waxay ka digeysaa warbixinteeda ugu dambeysa in natiijooyinka baaritaanka ay la xiriirto fikradaha dadka ee ku saabsan tijaabooyinka ay la kulmeen muddadii ka horeysay faafitaanka cudurka Coronavirus ee adduunka ee sannadka 2020, taasi waxay sababi karta heerar aad u sareeya oo ka badan kuwa hadda aan soo sheegnay, marka loo fiiriyo waxay aafadu u keentay Laga soo bilaabo diiqad, xiisad iyo rafaad dad aan yareyn oo ka tirsan dadka adduunka ku nool.